- | खुमबहादुर खड्का, कांग्रेस नेता कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढेको छ । तर, तपाईंं अनपेक्षित रूपमा मौन हुनहुन्छ ? स्वास्थ्यका कारण म घरमै छु । अर्को, पर्ख र हेरको अवस्थामा छु । देशभरिको परिणाम कस्तो आउँछ, त्यसलाई नियालिरहेको छु । अहिले सबै साथी जिल्ला–जिल्ला पुग्नुभएको छ । म सबै साथीसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु । सही समय आएपछि निर्णय गर्छु ।
१३औं महाधिवेसनमा मुख्य तीन धार देखिएका छन्, एउटा संस्थापन, अर्को रामचन्द्र पौडेल र तेस्रो शेरहबादुर देउवा । तपाईंंको समर्थन कतातिर छ ? सबै ठाउँको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छैन । सकेसम्म शेरबहादुरजीसँग मिलेर जाने भन्ने मेरो मनस्थिति हो । तर, उहाँले कसरी सोच्नुभएको छ, कुरा भएको छैन । जिल्लाको निर्वाचन भर्खरै सकिँदै छ । मेरो टिमभित्र पनि कोही संस्थापनसँग, कोही रामचन्द्रजीसँग कोही शेरबहादुरजीसँग मिल्दा हुन्छ भन्नेमा छन् । हामी आफैं जित्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । आदर्शको कुरा गरे पनि धाक लगाए पनि आखिर राजनीति भनेको सत्ताकै लागि हो । त्यसैले साथीहरूलाई कसरी ‘एडजस्ट’ गर्ने भन्ने छ । त्यो विषयमा छलफलपछि कता समर्थन गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ ।